Ahịa kacha mma na Spain | Akụkọ Njem
Ahịa kacha mma na Spain
Maria | | Izu ụka, Oge ntụrụndụ
El Rastro de Madrid, oge a na-agaghị anabata na Sọnde ọ bụla
N'agbanyeghị ọganihu na azụmaahịa ọnlaịnụ, ahịa ọdịnala na-ejigide ọmarịcha ahụ na-eme ka ha bụrụ ebe na-atọ ụtọ ịga ezumike ma chọta ezigbo akụ. Stroll, tụnyere ma zụta… Anyị hụrụ ahịa n'anya! Ọ bụ ya mere na post na-esonụ anyị na-ewetara gị ụfọdụ ndị mara mma na Spain kwa izu na-adọta ọtụtụ narị ndị ọbịa.
1 Navacerrada ahịa
2 Chọpụta nke Madrid
3 Ahịa moto
6 Alcaicería nke Granada
7 Ahia Mestalla
8 Mepee Ganbara gị
Ndị hụrụ ihe mgbe ochie na ihe ndị nwere aka abụọ nwere oge atọrọ na Navacerrada flea market ụbọchị Sọnde ọ bụla. Dabere na Paseo de los Españoles s / n, na oghere dị n’èzí ọ na-adaba adaba ileba anya na map ihu igwe tupu ị gaa na ya ọ bụrụ na ọ dị oke oyi ma ọ bụ na-ekpo ọkụ. N'ebe a ị nwere ike ịchọta ihe ụmụaka ji egwuri egwu, tebụl, ihe osise, klọọkụ, ihe akpụrụ akpụ, oriọna, vinyl, arịa ụlọ ... atụmatụ zuru oke iji nwee ọ enjoyụ n'ugwu Madrid.
Chọpụta nke Madrid
El Rastro bụ ahịa akara ngosi na Madrid nwere ihe karịrị afọ 400 nke akụkọ ntolite ebe ị nwere ike ịchọta ụdị ihe ọ bụla kwa ụbọchị, ihe ochie na ahịa. Ọ bụ ahịa na-emeghe n'èzí nke a na-eme na Sọnde na ụbọchị ezumike na etiti akụkọ ihe mere eme nke isi obodo, na etiti agbata obi nke La Latina, ọkachasị n'okporo ámá Ribera de Curtidores.
Offọdụ n'okporo ámá ndị gbara Ribera de Curtidores gburugburu bụ ndị a raara nye maka ire ụfọdụ ngwaahịa pụrụ iche dịka nka, akwụkwọ, akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ mmado, ihe ochie na ọbụnadị anụmanụ.
Agbanyeghị igwe mmadụ nke na-etolite na mpaghara ụfọdụ, ọ bụ ihe na-enye obi ụtọ iji ụtụtụ Sọnde gaa ụlọ ahịa Rastro iji kwụsị ụfọdụ nri na Tapas n'ụlọ mmanya ndị gbara ya gburugburu.
Otu izu ụka kwa ọnwa, ọdụ ụgbọ oloko ochie nke Delicias, nke mbụ a ga-ewu na Madrid na nke taa nwere Railway Museum, nwere ọtụtụ ụlọ ebe a raara nye ejiji, ịchọ mma na gastronomy. O nwekwara mpaghara ebe ndị mmadụ na-ere ihe ha na-ejighizi eji ya eme ihe nke ọma.
Tụkwasị na nke ahụ, Mercado de Motores bụ ohere magburu onwe ya iji chọpụta ihe dị n'ime ụlọ ihe ngosi nka, otu n'ime nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe site na narị afọ nke XNUMX ka na-eguzo na Madrid. Ọ dị na Paseo de las Delicias, 61 ma nwekwa ebe a na-ere nri ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ nri mgbe ị na-enwe ezigbo egwu.
Ahịa dels Encants dị na Barcelona, ​​nke a makwaara dị ka Mercat Fira de Bellcaire, bụ nke kachasị ukwuu na nke ochie na obodo. Ọ dị na Avinguda Meridiana, 73 ma na-eme na Mọnde, Wednesde, Fraịde na Satọde.
Ọbụghị naanị na ịnwere ike ịchọta ụdị ihe niile ebe a, kamakwa a na-ahazi auctions yana a na-enyekwa ụdị ọrụ mgbakwunye dị iche iche, dịka ọrụ gastronomic. Ihe omume nke nri n'okporo ámá bịakwara n'ahịa Barcelona a ka ndị ọbịa wee nwee ike ịnụ ụtọ nri dị ụtọ na oghere ma ọ bụ buru ha laa mgbe ụbọchị ụbọchị nchọgharị na-agagharị. Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, enwerekwa agụmakwụkwọ na ntụrụndụ nke ụdị dị iche iche maka afọ niile.
Foto | Nwa Nwoke
Gagharị na Mercantic n'ụtụtụ Sọnde bụ ịbanye n'otu obodo nta nke ụlọ nwere agba pastel nke yiri ka esi na Instagram. Fans nke Vintage mma ga-achọta na Mercantic ohere ebe ha nwere ike ịchọta ihe kachasị iche na nke na-adọrọ mmasị nke arịa ụlọ ochie na ihe ndị enwetara. Enwekwara ndị na-ekepụta atụmatụ nke aka ha na ọhaneze na-ahazi maka ọtụtụ aka.
Slọ ahịa akwụkwọ El Siglo dị oke egwu, ebe a na-ahazi egwu na vermouths na ngosi na ire nke ọtụtụ puku akwụkwọ ochie na nke abụọ. Mercantic na-emeghe kwa ụbọchị ma dị na Av. De Rius i Taulet, 120, Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Alcaicería nke Granada
N'oge Al-Andalus ọ bụ ahịa nke eze Granada nke a na-edozi silk na ụdị ọmarịcha ngwaahịa niile. Mgbe ọgbụgba ndụ ahụ gara n'ihu ọ bụrụ ebe azụmahịa dị mkpa mana ọ na-adalata ruo mgbe narị afọ nke iri na itoolu ọ tara nnukwu ọkụ. Ugbu a, ọ nwere oghere pere mpe karịa nke mbụ mana ndị obodo na ndị njem nleta na-agakarị. Ọ na-emepe kwa ụbọchị ruo elekere 21 nke abalị n'okporo ámá Alcaicería.
Ọ bụ ụlọ ahịa Valencian kacha ama ama n'etiti ndị hụrụ ịla azụ na mkpụrụ vaịn. A na-etinye ya na Sọnde ọ bụla na ezumike na Mestalla stadium car park. Na 2019 ọ ga - enwe ebe ọhụụ mgbe ọ gafere Alameditas de Serranos, akụkụ Naples na Sicilia na, ugbu a, n'etiti ụzọ Aragón na Sweden, na-esote ama egwuregwu Mestalla. N’ahịa a, ihe ochie, ngwa ọrụ, ihe ndekọ, eserese, akwa na ihe niile mmadụ nwere ike iche n’agwakọtara.
Foto | Oghere oghere
Mepee Ganbara gị
Ahịa nke oge a na nke okike dị na gburugburu ebe pụrụ iche dịka ụlọ ọrụ kuki ochie nke Artiach. Mepee Ganbara gị, ihe omuma ohuru nke na-eme na oghere ndi emezigoro iji weta otutu oge ezumike, ejiji, nka na uzu ndi mmadu. N'ebe a, ndị ọchụnta ego na-ekpughe ụdị ha na atụmatụ ha mana n'etiti ụlọ ahịa ị nwekwara ike ịnapụta ụfọdụ ihe pụrụ iche na ihe ochie. Mepee Ganbara gị nke dị na La Ribera de Deusto / Zorrotzaurre kemgbe 2009.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Oge ntụrụndụ » Ahịa kacha mma na Spain
Na ahịa Sunday na Sant Antoni, Barcelona! Vermouths na akwụkwọ!
Nginggbanwe ndị nche na London